Home Wararka Qaramada Midoobay oo baareysa shirkad lagu eedeyay inay qalab ciidan geysay Soomaaliya
Qaramada Midoobay oo baareysa shirkad lagu eedeyay inay qalab ciidan geysay Soomaaliya
Shirkad dhinaca badda ah oo fadhigeedu yahay dalka Turkiga ayaa bishii April 2021 soo gaarsiisay Soomaaliya gaadiid dagaal, iyadoo aan la ogeysiin Qaramada Midoobay waaxdeeda u hoggaansanaanta shuruudaha cunaqabateynta.
Arrintan ayaa keentay in baarayaasha Qaramada Midoobay ay bilaabaan baaritaanka shixnadaha gaadiidka dagaalka.
Sida laga soo xigtay xog ay heleen khubarada Qaramada Midoobay ee ka shaqeeya u hoggaansanaanta cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya, shirkadda Istanbul Lojistik ve Denizcilik Limited Şirketi, ayaa 44 baabuur oo nooca “Kamaz” ah ka dejisay dekedda Muqdisho 30-kii Abriil, 2021.
Guddiga khubarada Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay u oggolaaday inay kormeeraan u hoggaansanaanta cunaqabataynta hubka ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, ayaa sheegay in aanay wax war ah ka soo gaadhin shirkadda iyo dawladda Turkiga toona.
Guddidu waxay warqad rasmi ah u direen Istanbul June 8, 2021 iyagoo weydiisanaya macluumaadka ku saabsan gaadiidka milatari si ay u go’aamiyaan inay u hoggaansamaan shuruudaha cunaqabateynta hubka ee Qaramada Midoobay.
Iyada oo qayb ka ah waajibaadka ku xusan Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee tirsigiisu yahay 2551, ee la ansixiyay 2020, khubarada Qaramada Midoobay ayaa dib u eegis ku sameeya hubka la geeyo Soomaaliya, waxayna warbixinno joogto ah u gudbiyaan golaha.
Cunaqabataynta hubka ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa qayb kaliya laga qaaday sanadkii 2013-kii, waxaana khubarada Qaramada Midoobay ay la socdaan dhammaan hubka la geeyo Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa dowladda Federaalka iyo sidoo kale kuwa sida qarsoodiga ah ay ku helaan Al-Shabaab.
Previous articleGolaha Ammaanka oo maanta dhageysanaya warbixinku saabsan xaaladda Soomaaliya
Next articleFive reasons why militants are targeting Kenya’s Lamu county
Beesha Habargedir wacad ku martay inay difaacayaan RW Rooble, kuna baaqday...
Madaxweyne Muse Biixi oo maamus heer dal ah loogu soo dhaweeyay...